खुशीको खबर ! खुल्यो इजरायल एकैपटक १ हजार नेपाली लाने, मासिक तलब २ लाख, यसरी दिनुहोस् आवेदन (जानकारीका लागि सेयर) – 24updatemedia
खुशीको खबर ! खुल्यो इजरायल एकैपटक १ हजार नेपाली लाने, मासिक तलब २ लाख, यसरी दिनुहोस् आवेदन (जानकारीका लागि सेयर)**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
कोभिडका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र प्रभावित भए पनि त्यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स (विप्रेषण) मा भने कुनै प्रभाव परेको छैन। ०७६ चैतपछि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। **** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
छिटफुट संख्यामा केही युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान सफल भए पनि अधिकांश गन्तव्य मुलुकले रोजगारीका लागि श्रमिकलाई बोलाएको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले औपचारिक क्षेत्रबाट आउन थालेकाले रेमिट्यान्सको परिमाण बढेको बताए।
‘पहिला हुन्डीबाट आउँथ्यो, अहिले बैंकिङ तथा रेमिट कम्पनीबाट आउन थालेको छ,’ उनले भने,‘यसले गर्दा परिमाण बढेको हो।’
केही वर्षअघि रेमिट्यान्सले ३० प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगटेको थियो। अहिले पनि रेमिट्यान्सले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी नै हिस्सा ओगटेको छ। विश्व बैंकले समेत रेमिट्यान्स घट्ने अनुमान गरेको थियो। तर नेपालमा कोभिडपछि रेमिट्यान्स घट्नुको साटो बढ्दो छ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
विभागका अनुसार ५५ लाखभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएर नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न मुलुक पुगेका छन्। तीमध्ये फर्किनेको संख्या यकिन नभए पनि ठूलो हिस्सा अझै वैदेशिक रोजगारी मै रहेको बिभागको भनाइ छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
Previous आज पत्याउनै नसकिने गरी ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य,प्रतितोला कति?
Next आजदेखि टेलिकमले नमस्तेबाट नमस्ते कल फ्रि गर्ने सेवा सुचारु ?